Fandriampahalemana :: Hiofo ho toeram-panofanana mpanao vy very ny ainy ny toby any Ambatolampy • AoRaha
Fandriampahalemana Hiofo ho toeram-panofanana mpanao vy very ny ainy ny toby any Ambatolampy
Hanana ny toeram-piofanana mpanao vy very ny ainy amin’ny asan-jiolahy ato anatiny ny Zandarimaria afaka fotoana vitsy. Vonona amin’ny toerana sy ny olona hanofana ireo mpitandro filaminana manokana ireo ny toby “Escadron blindé” any Ambatolampy. Hanampy betsaka amin’ny fanomezana fahaiza-manao sy traikefa amin’ireo mpanofana ny firenena frantsay.
Nandritra ny fihaonan’ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria na ny Seg sy ny tompon’andraikitra ambony teo aloha teo anivon’ny Vondron’ny vonjy taitran’ ny zandarimaria Frantsay na Gign teny Betongolo omaly no nahafantarana an’ity tetikasa ho fanamafisana ny paikady fampandriana fahalemana eto amintsika ity. Nanome toky ny vahiny fa “vonona ny hitondra ny traikefany amin’ny fanofanana ireo zandary ireo”.
“Nilaozan’ny toetr’andro ny Vondron’ny tafondro ato amin’ny zandarimaria. Isika efa manana fifanarahana amin’ireo vondrona iraisam-pirenena, toy ny Vondrona afrikanina, ny Vondron’ireo firenana aty amin’ny faritra atsimo sy atsinanan’i Afrika na ny Sadc sy ny maro hafa. Vonona hanampy antsika ry zareo raha sanatria ka misy ny fahavalo avy any ivelany. Ny ady amin’ny asa fampihorohoroana, ny fakana an-keriny, ny asan-jiolahy mahery vaika ato anatiny no imasoana manomboka izao. Antony hirosoana amin’io fananganana toby fiofanana manokana io izany”, hoy hatrany ny Seg.
Herisetra :: Zandary iray voasambotra rehefa nandratra olona